Mpanamboatra flange flange flange tsara indrindra 8 Puyang
Size 1/2 ″ -60 ″ (DN12-DN1500)
Naoty 150 #, 300 #, 400 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 #
Malagasy ANSI / ASMEB16.5, B16.47, B16.36, B16.48.BS4504, BS3293, MSSSP44, AWWA, EN1092-1, DIN, JIS2220, GB T9112-9124, GB / T 20592-2009, SH406, JB / T, GB / T 20615-2009, GB / T 2506-2005, JB / T 4703-2000
Fanamarinana ABS; TUV; TS; CCS
Ny flanges dia ampahany lehibe amin'ny tetikasa injeniera sy fantsom-pandrefesana maro. Ampiasaina amin'ny sehatra maro samihafa, toy ny fitaterana (fantsom-pitaterana, sambo) misy solika, gazy, rano sns, ny toeram-pamokarana sy ny famokarana herinaratra, ny akora simika ary ny zezika simika, ny flanges dia karazana sy endrika maro karazana. , ary ny fitaovan'izy ireo koa dia miovaova (vy ambany karbaona, vy kely firaka, vy tsy misy fangarony, vy firaka avo, vy tsy ferrous, na toy izany) mifanaraka amin'ny karazan-tsiranoka sy tontolon'ny serivisy.
Amin'ny rindranasa maro, ny injeniera dia mila mitady fomba hanidiana ny efitrano na varingarina amin'ny fomba azo antoka, matetika satria ny atiny ao anatiny dia tsy maintsy samy hafa amin'ny akora ivelany ao anaty firafitra na tsindry. Ataon'izy ireo izany amin'ny alàlan'ny fametahana vy roa na fitaovana hafa miaraka amina boribory boribory eo amin'ny molotra. Ity "molotra" ity dia flange.
Azonao atao ny mampifandray faritra roa amin'ny fantsom-by amin'ny alàlan'ny fametahana na ny fametahana azy ireo, fa ny fantsom-pifandraisana mifandraika amin'izany fomba izany dia tena mora tohina amin'ny fanerena avo lenta. Ny fomba fampifandraisana amina faritra roa amin'ny fantsona azo antoka kokoa dia amin'ny alàlan'ny faran'ny flanged izay ahafahanao mifandray amin'ny bolt. Amin'izany fomba izany, na dia miakatra hatramin'ny tsindry mafy ao anaty fantsona aza ny entona na ranon-javatra, dia mitazona tsy misy olana izany matetika.
■ Fividianana fitaovana
■ Fanaraha-maso ny akora
■ Fanangonana fitaovana
■ Fanaraha-maso hosoka
■ Fitsaboana hafanana aorian'ny fanaovana hosoka
■ Fitsapana ny fananana mekanika
■ Fanamarinana refy
■ Fanaraha-maso tsy misy fananahana
■ Lavaka fandavahana
■ Fanaraha-maso farany
■ Famonosana vokatra
Amin'ny dingana fisokafana, mifehy ny mari-pana isika, manamarina ny habeny, avy eo mametraka azy ireo ao anaty lafaoro fitsaboana hafanana. Diniho ny fananana mekanika, ny habeny. Aorian'izany dia manomboka milina isika,
Zahao indray ny refy. Manaova fizahana tsy mitongilana mba hahazoana antoka fa tsy misy triatra ao anatiny.
Loavam-pandavahana, fanamarihana, fizahana farany, famonosana.
Izahay dia manohy manohy ny vokatra tonga lafatra, ny atiny sy ny teknolojia bebe kokoa ary ny kalitao avo lenta, ny famolavolana teknolojia mandroso kokoa, ny serivisy mandanjalanja kokoa hanomezana fahafaham-po ny mpanjifanay ary hiara-mandresy ny tsena.
Teo aloha: Flange jamba
Manaraka: Plate Flange